अस्पतालको लापरबाहीको कारण बालिकाको ज्यान गएको भन्दै आफन्त आक्रोशित - Everest Dainik - News from Nepal
अस्पतालको लापरबाहीको कारण बालिकाको ज्यान गएको भन्दै आफन्त आक्रोशित
काठमाडौँ, वैशाख २३ । बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा गलत समूहको रगत चढाउँदा गम्भीर भएकी बालिकाको गएराति मृत्यु भएको छ ।
सर्लाहीकी ५ वर्षीया बालिका आकृतिकुमारी साहको शल्यक्रिया क्रममा अर्कै समूहको रगत चढाएपछि स्वास्थ्य गम्भीर थियो ।शल्यक्रियामा डा. नवीनचन्द्र गौतमले बालिकाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै के कारणले मृत्यु भएको हो अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बालिकाको ज्यान गयो । हामी दुःखी छौं । के–कसरी यस्तो भयो छानविन हुन्छ ।’
याे पनि पढ्नुस आजपनि देशभर वर्षा हुने सम्भावना, किन दिनहुँ वर्षा हुन्छ ?
मृतक बालिकाका आफन्त भने अस्पतालको लापरबाहीले ज्यान गएको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् । अस्पतालले सम्बनधित चिकित्सकलाई कारबाही र बालिकाको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म शव नउठाउने पक्षमा छन् । बालिकाको शव अहिले गंगालाल अस्पतालमै छ । मृतकका आफन्तले गंगालाल परिसरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मेडिकल रिपोर्टमा बालिकाको रक्तसमूह ‘ओ’ पोजिटिभ छ । रगत चढाइएको रिपोर्टमा भने ‘ए’ पोजिटिभ लेखिएको छ । मुटुमा समस्या भएपछि वैशाख १३ गते उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । १७ गते उनको शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस नेपाली स्याटलाईट अन्तरिक्ष केन्द्रमा सफलतापूर्वक जोडियो
अवस्था गम्भीर भएपछि अस्पतालले बिरामीलाई भेट्न नदिएको आफन्तको गुनासो छ । गलत रगत चढाइएकोबारे खोजीनिती गर्न थालेपछि बिरामी पक्ष र अस्पताल प्रशासनसबीच विवाद भइरहेको छ । अस्पतालले बालिकाको रगत समूह ‘ए’ पोजिटिभ नै थियो भन्ने जबर्जस्ती पुष्टि गर्नका लागि रगतसम्बन्धी तीनवटापो रिपोर्टमा केरकार गरी आफैंले लेखेको ‘ओ’ पोजिटिभको ठाउँमा ‘ए’ जिटिभ बनाएको भेटिएको छ ।
बालिकालाई शल्यक्रियामा लगिनुअघि बिरामीका आफन्तसँग लिइएको सहमतिमा डा. ज्योतिन्द्र शर्मा, डा. रवीन्द्रभक्त तिम्ले र डा. नवीनचन्द्र गौतमले शल्यक्रिया गर्ने उल्लेख छ । अस्पतालका निर्देशक समेत रहेका डा. शर्माले भने शल्यक्रियामा आफू संलग्न नभएको बताए ।
याे पनि पढ्नुस जनविश्वासलाई समुन्नत बनाउने गरी लोकसेवाले काम गर्नुपर्छः राष्ट्रपति भण्डारी
‘यो घटनाबारे मलाई धेरै थाहा छैन, अस्पतालमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गराउने छु’, उनले भने, ‘अनुसन्धानपछि जसबाट गल्ती भएको छ, उसलाई कारबाही गरिने छ । बच्चाको शल्यक्रिया नै जटिल थियो । ओपन हर्ट सर्जरी जटिल नै हुन्छ ।’